PMMA PC, ပေစာရွက် / ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း - တရုတ် Qingdao Xinquan ပလတ်စတစ်
PET, PMMA စာရွက် / ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ပေ၏ 1. စက်ညွှန်ကြားချက်, PMMA စာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း:
အဆိုပါ PET ပွင့်လင်းစာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအထူးပေတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ် Multi-layer ကိုစာရွက်များသည် APET များအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ဒါကြောင့်လည်းသည် PS, PP, PE စာရွက်သည့်အခါပြောင်းလဲမှုပြီးနောက်အချို့သောဆွေမျိုးအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်နိုင်သည်, တက Multi-functional ဖြစ်စေထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
PMMA ပွင့်လင်းစာရွက်လိုင်း PMMA အစိုင်အခဲစာရွက်နှင့်ဖောင်းကြွစာရွက်၏ထုတ်လုပ်ရာတွင်အထူးပြုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအထူ 0.8-10mm ထံမှကွဲပြားထုတ်ကုန်များနှင့် max ကိုအကျယ် 2100mm မှတက်။
PET, APET PMMA, PC ကို
ပင်မ Extruder ဝက်အူ DIA 120mm 130mm 75mm (Twin screw) 120 130
ပင်မ Extruder ဝက်အူ L / D 33: 1 33: 1 44: 1 36: 1 36: 1
ပင်မ Extruder drive ကို 160kw 200kw 160kw-250kw 185kw 250kw
co-extruder ဝက်အူ DIA ။ 65mm 75mm 65mm သို့မဟုတ် 75mm 45mm 45mm
co-extruder ဝက်အူ L / D 33: 1 33: 1 33: 1 30: 1 30: 1
co-extruder drive ကို 37kw 45kw 37kw သို့မဟုတ် 45kw 22KW 22KW
စာရွက်အထူ 0.15mm-1.2mm 0.8-8mm 1.5-10mm
စာရွက်အကျယ် 560mm-1500mm 1000-1560mm 1220-2100mm
မက်စ်။ Extrusion စွမ်းရည် 350kg / h 500kg / h 350kg / ဇ-800kg / h 420kg / h 600kg / h
installation ပါဝါ 250kw 320kw 200kw-400kw 180kw 250kw
3. PMMA, PET, PC ကိုစာရွက်ကုန်ပစ္စည်းများ Features
1.Impact ယဉ်, ခိုငျမွဲ: ဖန်ထည်များပိုလျှံအတွက်အစွမ်းသတ္တိ, အကြိမ် acrylic ဘုတ်အဖွဲ့ရာပေါင်းများစွာ, ခက်ခဲတဲ့လုံခြုံရေး, အိမ်ထဲမှာသူခိုး, ကျည်ဆံ-အထောက်အထားအကျိုးသက်ရောက်မှု
, ကောင်းမွန်သောလုပ်ကိုင်နိုင်သော: ကွေး,2မြို့ပတ်ရထားမဟာ plasticity, ဆောက်လုပ်ရေး site ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီတစ်ဦးအောက်တိုက်, semicircular ပုံစံသို့ငုံ့
စီမံခန့်ခွဲရန်ဆောက်လုပ်ရေးလွယ်ကူပါတယ်, ကိုင်တွယ်ရန်ဖန်၏ထက်ဝက်အလေးချိန်, ပြည်နယ်နှင့် install: သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသော 3. အလင်းပစ္စည်း။
ရေရှည်တိုက်ဖျက်ရေးခရမ်းလွန်, အထူးသဖြင့်ကောင်းသောအလင်းရောင်သက်ရောက်မှု, စွမ်းအင်ကုန်ကျစရိတ်၏ပမာဏကိုလျှော့ချ: element တွေ, အလင်းရောင်အားသာချက်များ4ခုခံ
5. က Ultra-ပွင့်လင်း, စူပါလျှပ်ကာ: င့်လင်းမြင်သာနီးပါးဖန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏, Self-ငြိမ်းအေး, အကောင်းဆုံးအလင်းရောင် နှင့် fireproof ပစ္စည်း
* အဆိုပါ PET စာရွက်များ အဓိကအားဖြင့်အစားအစာအဘို့, နို့, ဆေးဝါးများ, အသား, အလှကုန်, စတာတွေအဘို့အ packages များ box ကိုများနှင့်ကွန်တိန်နာထုတ်လုပ်ရန် thermoforming စက်သို့မဟုတ်ဆေးထိုးတန်ဆာစက်မှအသုံးပြုကြသည်
* PMMA စာရွက် ကျယ်ပြန့်ပွင့်လင်းခြင်းနှင့် Advertising ကြော်ငြာအဆောက်အဦးပစ္စည်းများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အသုံးပြုသည်: ဥယျာဉ်သည်အပန်းဖြေနေရာ, အလှဆင်တဲ့မြို့ပြအဆောက်အဦ; လေကြောင်း၏ပွင့်လင်းကွန်တိန်နာ, ထိုစင်္ကြံတဲအတွက် windscreen; စီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပအဆင်တန်ဆာ, ဆိုင်ကယ်၏ခေတ်သစ်မျက်နှာစာ၏ကုလားကာနံရံလေယာဉ်, ရထား, အမီးသင်္ဘော, ထိုရေငုပ်သင်္ဘော, တပ်မတော်နှင့်ဒိုင်းလွှား, တယ်လီဖုန်းတဲ, ကြော်ငြာအကူ, မီးခွက်အိမ်၏ကြော်ငြာ polices, အဆိုပါ Expressway နှင့်မြို့ partition ကိုအကာအကွယ်မျက်နှာပြင်၏ overhead နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ယခင်: EVA, TPU PP, PE Wide Geotexile (Geomembrane) ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
နောက်တစ်ခု: foam ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း XPS
စက်ပြုလုပ်ခြင်း Epe မြှုပ်စာရွက်
pc Hollow စာရွက်
ကွန်ပျူတာ Hollow စာရွက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ဖေရေမြှုပ်စာရွက် Extrusion လိုင်း
ပလတ်စတစ်စာရွက် Extrusion စက်
စစ Hollow စာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC Artificial စာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းစာရွက် Extrusion လိုင်း
PVC စာရွက် Extrusion လိုင်း
ထုတ်လုပ်သူသည်စာရွက် Extrusion စက်
စာရွက် Extrusion ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
စာရွက် Glass ကိုထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Wpc စာရွက် Extrusion လိုင်း
Xpe မြှုပ်စာရွက် Extrusion လိုင်း
PVC coil Mat / ကော်ဇောထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC elasticity ကြမ်းပြင်စာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC အလှဆင်ခြင်းနှင့် Transparent PVC စာရွက်ထုတ်လုပ်သူ ...
EPE မြှုပ်ပိတ်စ (Package ကိုများအတွက်) ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း